Ikamva leSelfowuni | Martech Zone
Lwesine, ngoFebruwari 6, 2014 Lwesine, ngoFebruwari 6, 2014 Douglas Karr
Rhoqo kwiintsuku ezimbalwa, mna nentombi yam sixabana ngokuba ngubani na onentambo yokutshaja. Ndiyirhalela intambo yam kwaye uhlala eshiya intambo yakhe emotweni yakhe. Ukuba iifowuni zethu zombini ziphantsi ukuya kwipesenti enye yeshajithi… jonga! Iifowuni zethu ziye zaba yinxalenye yomntu wethu. Zizihlunu zethu zokudibanisa nabahlobo bethu, irekhoda yethu yangoku, umhlobo wethu osikhumbuza into emasiyenze ngokulandelayo, kunye nealam yethu yokuvuka kusasa. Xa isifa, siziva silahlekile entlango. 🙂
Ikamva liphethe ntoni? Ngokoluvo lwam, idesktop, ilaptop kunye nethebhulethi iya kunyamalala kubomi bethu kwaye sonke siya kuba neefowuni zethu. Njengokuba sihlala phantsi emsebenzini, sizakukhupha ifowuni yethu kwaye siyijonge kwiscreen esikhona phambi kwethu… kufana neAplayplay neAppleTV isebenza ngoku. Imicimbi yokufaka iintambo, ukufaka iikhonkco, ukungqamanisa, njl. Zonke ziya kube zingasekho, sonke siya kuqhuba umabonwakude, unomathotholo, iimoto zethu nayo yonke enye into ngefowuni. Usasazo kunye neenkampani zekhebula ziya kunyamalala njengoko isixhobo esiphathwayo sisiba sisiseko salo lonke unxibelelwano. Iipaji ziya kuthi shwaka njengoko isazisi sethu sinokuqinisekiswa ngefowuni.
Ngethemba, phakathi kwangoku emva koko emva koko sifumanisa ukuba singabandisa njani ubomi beebhetri kwizixhobo zethu, sikhawulezise amaxesha okutshaja kunye / okanye inkosi yokutshaja (ngaphandle kwentambo)… ukuze mna nentombi yam singalwi nentambo yetshaja!
le I-infographic evela kwiNtathu isinika umbono wekamva elikufutshane lokwamkelwa kweselula!
tags: 2014201520162017ikamvangamazweUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiukukhula kwefowuniizibalo ezihambayoUkubikezelaefowuniihlabathi
Ukusebenza kweNtengiso yeNkqubo yokuTyhala
I-ebook yasimahla: Ngaba uyayidlala iMidlalo yamanani?